Ciidamada ammaanka oo gacanta ku dhigay nin dil ka geystay Waaberi | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ciidamada ammaanka oo gacanta ku dhigay nin dil ka geystay Waaberi
Ciidamada ammaanka oo gacanta ku dhigay nin dil ka geystay Waaberi
Ciidamada ammaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay mid ka ah rag hubeysnaa oo galabta degmada Waaberi gaar ahaan Buundada ku dhow xarunta degmada ku dilay Askari ka tirsanaa Ciidanka Dowladda Federaalka.
Warkan ah in gacanta lagu dhigay ninka dilka geystay waxaa Idaacadda Radio baidoa u xaqiijiyay Afhayeenka Wasaaradda Amniga C.casiis (Xildhibaan).
Afhayeenka ayaa sheegay rag hubeysan in ay degmada gudaheeda ku toogteen Askari, kadibna ay isku dayeen in ay baxsadaan balse wuxuu tilmaamay ciidamo halkaasi ku sugnaa oo durba ku baxay dilka ay u suuragashay in ay gacanta ku dhigaan mid ka mid ah ragga dilka geystay.
“Waxaa Ciidamada ammaanka u suuragashay in ay gacanta ku dhigaan dhagar qabe dil u geystay Askari Ciidamada Qalabka Sida ka tirsanaa, waana ku amaanaya Ciidamada, mar walba Hay’adaha ammaanka waxay diyaar u yihiin sugidda amniga” Ayuu yiri C.casiis (Xildhibaan).
Dhanka kale Afhayeenka Wasaaradda Amniga ayaa soo hadal qaaday Howlgallo gaar ah oo xalay ka dhacay Muqdisho, wuxuuna sheegay in Howlgallada ay ahaan doonaan kuwo joogto ah oo falalka arbushaada ah looga hortagayo.
Askariga dilka loo geystay ayaa waxa uu ka mid ahaan jiray ilaalada Guddoomiyihii hore ee degmada Waaberi Axmed Meyre Makaraan (Axmed Faal) oo hada ah Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Maanta degmada Hodan ee Gobolka Banaadir gaar ahaan agagaarka Jaamacadda Gaheyr waxaa rag hubeysan oo ka tirsanaa Shabaab ay dileen Farxaan Barkhadle oo ka tirsanaa saraakiisha Ciidamada xoogga dalka.